Ifama ye-Eco ekufutshane nechibi
Indawo yokuhlala kwilali encinci iLipsenj, kumbindi weSlovenia embindini wepaki yendalo yengingqi iCerknica. Igumbi elitsha nelixhotyiswe ngokupheleleyo elinekhitshi kunye negumbi lokuhlambela apho unokufumana uxolo kwaye wonwabele indalo. Le ndlu ikwindlu yosapho, izizukulwana ezi-2, usapho oluncinci kunye nootatomkhulu. Ixesha elininzi silichitha sisebenza kwifama yethu enezilwanyana kunye negadi enkulu. Sikwavelisa iimveliso zobisi lwebhokhwe olutsha esivuyayo ukukunika lona.
Unomnyango wakho wokungena, amagumbi amabini (igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlala / lokutyela elinebhedi yesofa), ikhitshi elincinci elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlambela. Unayo yonke imfihlo oyifunayo, ilungele ukuhlala okufutshane okanye iiholide ezinde.
Eyona ndlela yokufika apha kukuya ngemoto. Kwindlela enkulu (2min) unesikhululo sebhasi (iibhasi ezisuka eCerknica okanye eLjubljana) kunye ne-12km kude yiRakek (isikhululo sikaloliwe) apho sinokukuthatha khona. Esona sikhululo sikufutshane iLjubljana okanye iTrieste (1h), Venice (2.5h).
Unayo indawo yakho yokupaka, ifama ikufuphi nendlela enkulu. Unembono entle kwichibi elinyamalalayo iCerknica (xa ichibi lizele) kwaye sisiqalo esihle sohambo olufutshane oluya eKrizna Gora, emqolombeni waseKrizna, echibini laseCerknica, uhambo olude, olulungele abafoti, abathandi bendalo, abalobi, ...
Kusoloko kukho umntu okhoyo ekhaya ukuze usifumane kwaye siyakuvuyela ukukunceda okanye sikubonise ngefama. Nceda ungangeni wedwa eshedini ngenxa yezizathu zokhuseleko.